अपराध गरेर भाग्नेहरु अब तत्काल समातिने ! « Karobar Aja
दस्तावेज, मंसिर ४ गते, सोमबार,२०७४,काठमाण्डौं – काठमाडौं उपत्यकामा बेला-बेलामा हत्या र अपराधका घटना हुने गरेका छन् । अपराधीको पहिचान हुने कुनै प्रविधि नहुँदा घटनामा संलग्न हुनेहरु लामो समय प्रहरीको आँखाबाट जोगिन सफल हुँदै आएका छन् ।
विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार दोस्रो चरणमा उपत्यका बाहिरका पाँच वटा मुख्य शहरमा पनि अत्याधुनिक प्रणाली जडान गर्ने तयारी छ । पहिलो चरणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराएलगत्तै गेट जडान गरिने छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा यान्त्रिक माध्यमबाट अंक र अक्षर राखिएको हुन्छ । नम्बर प्लेटको कुनामा सात वटा साना संकेत अक्षर राखिएका छन्, जसलाई रिडर मेसिनले मात्र पढ्न सक्छ । प्लेटको पछाडि सुरक्षा ‘बार कोड’ राखिएको छ ।प्लेटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेसन डिभाइस पनि जोडिएको हुन्छ । यसले सवारीसाधन कहाँ र कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे निगरानी गर्ने प्रविधियुक्त गेटले नजिकको टावरलाई जानकारी दिन सक्छ ।
प्लेटमा जोडिएको चिप्सलाई मेसिनको सहायताले ‘रिड’ गरी सवारीसाधनको विवरण हेर्न सकिन्छ । उक्त विवरण सरकारको विध्युतीय अभिलेखमा सुरक्षित रहन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीमा एउटा चिप्स स्टिकर टाँसिएको हुन्छ । उक्त स्टिकरमा सवारी साधनका विस्तृत विवरणहरु राखिन्छन् ।
उक्त नम्बर प्लेटमा राखिने प्रविधियुक्त चिप्सभित्र पनि सवारी धनी र सवारीका विभिन्न विवरण हुन्छन्, जसका आधारमा प्रहरीले सवारीको ‘डिटेल’ तुरुन्त लिन सक्छ । प्रहरीले हातैमा बोक्ने रिडर मेसिनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सहजै जाँच गर्न सक्छ । राजमार्गहरुमा राखिने गेटले पनि सवारीको सूचना राखिरहेको हुन्छ ।
गेट वारपार गर्ने जुनसुकै सवारीका सबै विवरण मेसिनले ‘रिड’ गर्दै कम्प्युटर प्रणालीमा ‘अटो इन्ट्री’ गर्नेछ । सोही माध्यमबाट कुन नम्बरको गाडी, कुन समयमा, कुन ठाउँमा पुग्यो भन्ने सूचना नम्बर प्लेटकै सहयोगमा प्रहरी र विभागले प्राप्त गर्न सक्छन् । उक्त सुविधाबाट प्रहरीलाई अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विभागको भनाइ छ ।